Ntụziaka dị mfe Quiche - Ezi Ntụziaka
-esi mee ka milkshake na-enweghị blender
taco itinye na hamburger na ude cheese
kedu ka ị si eme agwa peas
Ntụziaka dị mfe Quiche
Nke a Ntụziaka dị mfe Quiche na-amalite na a premade achịcha jikọrọ ọnụ ma ọ dịghị onye nwere mara! Ejiri ham, cheese na eyịm na-acha akwụkwọ ndụ ma zuru oke nri ụtụtụ ma ọ bụ nri abalị!
You nwere ike tinye ihe ọ bụla ịchọrọ na nri a dị mfe - akwụkwọ nri ndị ọzọ, chiiz dị iche iche ma ọ bụ oge - mana ham na cheese bụ ụzọ kachasị amasị anyị iji mee ya. Amaghị m banyere gị, mana anyị hụrụ n'anya akwa maka nri ọ bụla nke ụbọchị ebe a. Anyị ga-ewe ihe ngọpụ ọ bụla iji kporie ndụ ha maka nri ụtụtụ, nri ehihie ma ọ bụ nri abalị, na usoro a dị mfe nke quiche na-ejikọ ọdịiche dị n'etiti atọ ahụ. M hụrụ n'anya na-edebe m quiche Ezi ntụziaka mfe, na-eje ozi ha na ọmarịcha mkpụrụ osisi ma ọ bụ mara mma ọhụrụ salad !
Akwa maka Brunch
Ọ bụrụ na ị hụrụ akwa n'anya n'anya dịka anyị hụrụ ya, ị nwekwara ike ịmasị nke a N'abalị Nri ụtụtụ Casserole na anụ ezi ma ọ bụ nke a Nri ụtụtụ eji nwayọọ nwayọọ nri Mexico
E nwere ọtụtụ ọdịiche dị na kpochapụwo quiche uzommeputa, mana achọrọ m idobe ihe ọfụma n'oge a. Anyị na-amalite site na premade, friji achịcha achịcha ma jupụta ya na ihe niile dị mma!
Nwere ike iji ihe eji eme achịcha, achịcha akpọrọ akpọrọ akpọrọla nke nwere ike iwepụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme ihe a karịa mfe, mana achọrọ m ịpịpụta m ma ghee ya na otu n'ime efere m. N’ụzọ ahụ, ọ nweghị onye ga-ama maka ụzọ mkpirisi anyị mere!
mini cheesecake tarts na graham ihe jikọrọ ọnụ
Atụmatụ maka Ime Nke a Easy Quiche Recipe:
Ntụziaka a enweghị ike ịdị mfe ọ bụla - bido na a premade achịcha jikọrọ ọnụ , ma jupụta na ihe ndị kachasị amasị gị, tinyere akwa na mmiri ara ehi.
Otutu usoro nri nke ichoro nke ichoro gha achoputa ihe ndi ozo ma choo ihe ozo tinyere oge ozo. Anyị na iji esie, ham cubed na eyịm na-acha akwụkwọ ndụ a Ntụziaka iji hụ na nke a dị mfe nri ụtụtụ quiche uzommeputa na-ezukọta ngwa ngwa o kwere mee!
Echefukwala ilekwasị quiche anya ka ọ na-eme - ị chọghị ka eriri ahụ na-acha aja aja n’elu ka akwa wee sie! Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, kpuchie mgbanaka mpụga nke jikọrọ ọnụ jiri ntakịrị foil gbochie ya ịcha aja aja ọzọ.
Ọ bụrụ na ị bụghị onye ofufe nke achịcha achịcha, gbalịa mee a Puff achịcha dị iche iche Quiche ma ọ bụ ndị a Mfe Obere Quiche ejiri ihe mkpuchi!
Ì Nwere Ike Makechọta Ọgụ Tupu Oge Emee?
Bet nzọ! Ozugbo emechara ya, mee ka quiche dị jụụ ruo elekere abụọ na tebụl, wee ghaa friji. Ighaghachi, kpuchie quiche ahụ na foil na akpọọ nkụ maka ihe dịka 325F (ruo mgbe ọ dị ọkụ). Ime ka ọ dị jụụ tupu ị na-eme ka ọ dị jụụ na-enyere ya aka imezigharị.
Kedu otu ị ga - esi mee ihe na - enweghị atụ:
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ndị ọzọ na-enweghị gluten, ma ọ bụ na ị bụghị onye na-agba agba jikọrọ ọnụ (hey, anyị niile nwere mmasị nke anyị!), You nwere ike ịhapụ ihe mkpuchi ahụ ma wụsa ngwakọta akwa ahụ n'ime pan iji mee nke a ka ọ bụrụ Ntụziaka na-enweghị atụ. Ọ dị mfe!
Naanị echefula ịmịcha efere achịcha mbụ n'ihi na àkwá nwere ike isi ike ịpụ mgbe ha siri nri!
Ebe ọ bụ na ọ gaghị adị mkpa ka ị lelee eriri ahụ maka ihe ịrịba ama nke ịdị n'otu, ị ga-eme achịcha na-enweghị ntụpọ ruo mgbe akwa ga-edozi ya kpamkpam site na etiti ahụ.
ỌF BREAKR BREAK Nri ụtụtụ nabatara na ị ga-ahụ n'anya
N'abalị Nri ụtụtụ Casserole na Soseji - a aka-ala ezinụlọ mmasị!
Blueberry Ghere Oatmeal - nhọrọ ahụike, na-atọ ụtọ
Kuki nri ụtụtụ banana - maka nri ụtụtụ na-aga
Banana Aut Crunch Muffins - mmmm, muffins !!
4.9site naOgbe 271votu NyochaNtụziaka
Oge Nkwadebeiri na ise Nkeji Oge nri35 Nkeji Oge zuru ezuiri ise Nkeji Ọrụ6 servings Onye edemedeAshley Fehr Ntụziaka a dị mfe site na paseeji achịcha na-enweghị atụ mana ọ nweghị onye ga-ama! Ejiri ham, chiiz na eyịm na-acha akwụkwọ ndụ jupụta ya ma bụrụ nri ụtụtụ ma ọ bụ nri abalị zuru oke zuru oke! Nwere ike ịgbakwunye ihe ọ bụla ịchọrọ na nri a dị mfe - akwụkwọ nri ndị ọzọ, cheese dị iche iche ma ọ bụ oge.
▢1 friji achịcha jikọrọ ọnụ
▢6 akwa buru ibu
▢¾ iko mmiri ara ma ọ bụ ude
▢¾ ngaji nnu
▢1 iko osikapa ham gbanwere
▢1 ½ iko shredded chiiz ekewa
▢3 tablespoons akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ eyịm
Wepu ihe eji kpochapu ma tinye n'ime efere 9, na-acho onu elu ya ma acho.
Na nnukwu efere, gbanye àkwá, mmiri ara ehi, nnu na ose.
Wụsaa ham, 1 iko chiiz, na eyịm na-acha akwụkwọ ndụ n'ime achịcha achịcha ma wụsa ngwakọta akwa ahụ n'elu. Wụsa fọdụrụ cheese iko cheese n'elu akwa ngwakọta.
Ime ruo minit 35-40 ruo mgbe etiti ahụ ga-edozi. Mee ka ọ dị jụụ maka 5-10 nkeji tupu ịkpụ na jee ozi.
Calorisị:Ogbe 299,Carbohydrates:16g,Protein:iri na iseg,Abụba:18g,Abụba Ajuju:7g,Cholesterol:190mg,Sodium:Ogbe 705mg,Potassium:167mg,Sugar:abụọg,Vitamin A:Ugboko 505IU,Vitamin C:0.6mg,Calcium:208mg,Iron:1.7mg
Isiokwumfe quiche uzommeputa N'ezieNri ụtụtụ Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Ringkekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .
Weghachi nri nri ụtụtụ a
ỌZỌ KWES YOUR YOU ’GA-AHOV OVH. N'anya
Mee ihu akwa akwa
Biskit na Gravy